Japana: Ampamoaka Momba Ny Tontolon’ny Asa Fanadiovana ny toby Nokleary Ao Fukushima · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2012 11:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, Filipino, English
Nandrakitra ilay lahatsary [amin’ny teny japoney] an’i Tetsuya Hayashi, izay tsy nanampo hanao asam-panadiovana ao amin’ny toby nokleary ao Fukushima Daiichi, ny tranokalam-baovao japoney an’olotsotra 8bit news, tamin’ny 18 septambra 2012.
Nangataka asa nantsoina hoe ‘Backup Logistics Support’ izy (izay azo adika hoe « mpiasan'ny fampitaovana fototra »), fa tafiditra voalohan-daharana, ary voatery niharitra ny voka-dratsin'ny taratra tafakatra hatramin’ny 1 mSv isaky ny minitra ihany koa izy.
Niteraka fahasimbana goavana tao amin’ny toby nokleary ny horohorontany sy ny tsunami tamin’ny taona 2011 tao Japana.
Mampiseho ny hamafin’ny tontolon’ny asan’ireo mpiasa ao Fukushima Daiichi ny lahatsary [amin’ny teny japoney – tsy ampahibemaso intsony] (jereo eo ambany ny amin’ny teny anglisy) :
Nalefa niasa tao amin’ny toby ireo mpiasa saiky eo amin’ny 18, 19 taona, sady tsy nahazo fanofanana no tsy nisy fanomanana sahaza. Nangatahana izahay mba soratana anaty CV hoe manana traikefa, izay tsy misy akory, hoy ireo mpiasa.
Mpisera Twitter iray nahita fa tena tsy rariny ny zava-misy ka nanapa-kevitra ny handika ilay lahatsary amin’ny teny anglisy izy.
Tsy rariny tanteraka izao. Ka nadikako tamin’ny teny anglisy. →【Anarana tena izy/Ora farany】Niaraka tamin’ny “CV” diso ireo mpiasa amin’ny nokleary nalefa hiasa tao amin’ny toby. Ny marina momba ireo mpiasa marobe via @8bit_HORIJUN
Azonao vakiana eto ny dika manontolo [amin’ny teny anglisy] an’ilay lahatsary notontosain’I Yuri Hiranuma